China Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Fitaovana Masinina ary Famokarana | Runchen
Izy io dia ampiasaina amin'ny famenoana gilasy, saosy, na ranomandry amin'ny karazan-kaopy, kônà. Ny masinina mahazatra dia tsy afaka mamokatra vokatra gilasy iray fotsiny, fa raha manampy toby fiasana isan-karazany dia azo hamokarana koa ireo karazana kônina sy kaopy gilasy isan-karazany.
Runchen Krunt-Z 12 dia vahaolana lafo vidy izay tena mety amin'ny orinasa kely. Mety hihaona amin'ny mpanjifa tsy manana fepetra takiana avo lenta izy io .Fa mety hamokatra karazana gilasy isan-karazany miaraka amina Standard avo lenta. Azo ampiasaina koa izy io ho an'ny fanandramana laboratoara na fampivoarana gilasy.
Apetaho amin'ny kaopy dispenser ny kaopy, ary atsipy ireo mba hampiditra tsirairay ny vilaniny hiandry famenoana .Misy karazana famenoana samihafa miorina amin'ny akora samihafa toy ny gilasy, saosy na ranomandry-rano. Ny karazana famenoana dia mety ho famenoana be dia be, famenoana miserana ary famenoana fanapahana famenoana (fitaovana fanapahana iray no hapetaka).Runchen Krunt-Z12 koa dia azo namboarina tamin'ny faritra samihafa amin'ny haingon-trano mba handravahana ny velaran'ny gilasy. Raha mifanaraka amin'ny vokatra miendrika endriny hafa dia afaka misafidy fonosana fanampiny izy io, ary azo atao koa ny manisy tombo-kase ny vokatra amin'ny fanapahana horonantsary mialoha.Aorian'ny fanampiny na famehezana, ny ampahany amin'ny fanesorana dia hamoaka vokatra ary ampitaina avy amin'ny masinina famenoana mba ho tonga mangatsiaka haingana, mandra-pofona.
KruntTM-Z12 frame dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony .Ny famolavolana ny masinina mameno dia afaka mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fahadiovana. Ny firafiny misokatra malalaka dia afaka misoroka ny fitsitsiana rano amin'ny fomba mahomby ary diovina tsara.Ny endriny rehetra ao anatin'izany ny moka, ny fantson'ny fantsom-pifandraisana sy ny fiara dia mifanaraka amin'ny filan'ny fifandraisana mora, fanoloana ary fanadiovana.
Ny motera matetika dia mitarika ny fizarazarana fihodinana sy fihodinana, ary mifehy ny fihodinan'ny takelaka Module sy ny toerana miakatra sy midina. Fandefasana fambara maharitra amin'ny PLC amin'ny alàlan'ny kaody rotary mba hifehezana ny varingarina, ary hampandeha tsara ny faritra rehetra.
KruntTM-Z12 milina famenoana rotary dia fehezin'ny PLC afovoany. Miaraka amin'ny teny PLC, ny famokarana gilasy dia azo zahana amin'ny fomba mazava tsara, ary ny fanoloana azy dia mora tokoa. Manana habaka mitahiry 2MB izy, ary afaka manomboka na mijanona ho azy. Ny vokatra am-polony dia azo alamina mialoha.
Ny angon-drakitra vokatra dia haseho amin'ny efijery PLC .ary ny tontonana fanaraha-maso iray manontolo dia misy bokotra fikitika sy fampisehoana nomerika, manome fiasa sy fanaraha-maso mety.
Rafitra fanamafisana ny rivotra sy ny rafi-pitabatabana
Miorina amin'ny fitakiana fahadiovana ara-tsakafo, ny faritra rehetra ho an'ny rivotra compressor dia vita avy amin'ny fitaovana izay tsy misy harafesina, fanosotra .Ny valve rehetra dia mampiasa fomba elektrika ary apetraka ao anaty fefy. Ny varingarina rehetra dia avy any Festo. Ny faritra System vacuum izay ho an'ny dispenser sy ny sarony dia ampiarahin'ny valves matihanina.
KruntTMNy masinina famenoana -Z12rotary dia mandray ny endrika famolavolana mandroso sy ny faritra miasa mahery vaika mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny indostrian'ny gilasy. Ny tombony lehibe indrindra dia ny fiasany bebe kokoa noho ny karazana nentim-paharazana.
Frame azo antoka kokoa:
Manangana ny hamafin'ny rafitra mba hampiorina tsara kokoa ny fiasan'ny milina noho ny nentim-paharazana.
Bebe kokoa rafitra fiara maharitra :
Ny fampiasana fizarazarana maoderina sy fihodinan'ny fihodinana mba hahatonga ny motera lehibe dia milamina kokoa, mety kokoa hijerena sy hikolokoloana. Ny ankamaroan'ny gara dia mampiasa ny firafitry ny milina mba hanaovana feo milamina sy ambany.
Rafitra sôkôla mari-pana tsy tapaka:
Ny teknolojia fanamafisana ny mari-pana tsy tapaka dia ampiasaina amin'ny tsindry famenoana hisorohana ny fisehoan-javatra manakana vokatry ny fanamafisana ny sôkôla rehefa ambany ny mari-pana manodidina.
manome faritra samihafa izahay. Amin'ity tranga ity dia azo velarina betsaka ny haben'ny vokatra.
Fitaovana fitoviana mifanentana
-dalana, Tsipika 1 Tsipika 2
fahaizana isan'ora ho an'ny Standard 2400 4800
hafainganam-pandeha （stoke / min） 10 ~ 45 10 ~ 45
fahefana 2 kW
fahafaha-mitahiry sôkôla 25L
firakotra vokatra 2-6ml
fametahana vokatra 4-8ml
gazy betsaka (tsy misy solika, rano) ≤2.0g / m3
rivotra fanjifàna 1 m3/ min
tsindry miasa (min) 6bar (87LB / metatra toradroa)
Previous: Runjin © Krunt ™ -4000 Masinina afangaro amin'ny voankazo
Manaraka: Runjin © Krunt ™ -G4 Masinina mameno gilasy